आज जेष्ठ २३ गते आइतबार, कस्तो रहला तपाईंको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल - kageshworikhabar.com
आज जेष्ठ २३ गते आइतबार, कस्तो रहला तपाईंको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल
आज मिति वि. सं. २०७८ साल जेष्ठ २३ गते। आइतबार। तपाईंको आजको राशिफल
शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ रहनेछ। गरिएको हरेक कार्यमा सफलता मिल्नेछ। घरको वातावरण प्रफुल्लित रहनेछ। माईतबाट लाभ मिल्न सक्छ। आर्थिक लाभ होला। तपाईंको दिन आनन्द वा उल्लासमा बित्नेछ।मित्र र आफन्तसँग आनन्ददायी घुमफिर हुनेछ।
तपाईंको लागि दिन शुभ फलदायी छैन। अनेक प्रकारको चिन्ताले सताउनेछ वा शारीरिक स्वास्थ्य पनि ठिक रहनेछैन। आफन्तसँग मतभेद खडा होला। तपाईंको कार्य अधुरै रहन सक्छ। गरिएको परिश्रमबाट असन्तोष परिणाम मिल्नेछ। अविचारी निर्णयबाट गलत धारणा खडा होला।
अनेक रूपबाट लाभ भएको कारण हर्षोल्लास दुई गुणा वृद्धि हुनेछ। श्रीमती एवम् पुत्रको तर्फबाट लाभदायी समाचार मिल्नेछ। मित्रसँग भएको भेटले आनन्द मिल्नेछ। विवाहोत्सुकले योग्य जीवनसाथी पाउनेछन्। समयानुसार उत्तम भोजन सुख प्राप्त होला।
तपाईको दिन व्यवसायको लागि लाभदायी छ। उच्च अधिकारीको कृपादृष्टि रहनेछ। पदोन्नति होला। परिवारमा आवश्यक विषयमा चर्चा हुनेछ। आमाको स्वास्थ्य स्वस्थ रहनेछ। धन सम्पत्ति मान सम्मानको अधिकारी बन्नुहुनेछ। कार्यभारले थकान अनुभव हुनेछ।
तपाईंको दिन धार्मिक प्रवृत्तिमा बित्ला। आफन्तसँग कुनै धार्मिक स्थलमा जान सुनौलो अवसर मिल्नेछ। कर्मनिष्ठ भएर हातमा लिएको काम पूरा गर्ने प्रयास गर्नुहुनेछ। तपाईंको व्यवहार न्यायानुकूल रहनुहुनेछ। व्यवसायमा बाधा उत्पन्न होला। उच्चपदाधिकारी प्रसन्नताको कारण दुखी हुनुहोला।
बोलीमा विशेष ध्यान राख्नुहोला। कुनै नयाँ कार्यको प्रारम्भ नगर्नुहोला र रिस एवम् आवेश वृद्धि हुन् सक्ला। परिवार एवम् आफन्तसँग उग्र विवादको कारण दुख महसुस हुन् सक्छ। शत्रु प्रति सावधान रहनुहोला।
तपाईको दिन मित्र एवम् आफन्तसँग खान-पान, शेयर एवम् प्रेम सम्बन्धको कारण प्रफुल्लित रहला। यात्रा हुने योग छ। मनोरंजन साधना एवम् कपडा खरिद गर्नुहुनेछ। तन वा मनको तन्दुरुस्ती रहनेछ। मान-सम्मान मिल्न सक्छ।
दिन पारिवारिक आनन्द वा उल्लासमा बित्नेछ। तनमा चेतना एवम् उर्जाको सञ्चार हुनेछ। प्रतिस्पर्धी एवम् साथीभित्र लुकेको शत्रु आफ्नो प्रयासमा असफल हुनेछ। आर्थिक लाभ हुने योग छ एवम् अधुरो कार्य पूर्ण हुनेछ।
कार्य सिद्धि वा सफलता नमिल्नाले निराशा उत्पन्न हुन सक्ला। साथै रिसलाई नियन्त्रण गर्नुहोला। सन्तानसँग सम्बन्धित विविध प्रश्नको विषयमा मन चिन्ताग्रस्त रहनेछ। कुनै यात्रा आरम्भ नगर्नुहोला।
तपाईको दिन अशुभ रहन सक्ला। शारीरिक एवम् मानसिक रूपले प्रतिकूल अनुभव गर्नुहुनेछ। घरमा परिवारसँग अनिच्छनीय प्रसंग घटनाले मनमा अशान्ति हुनेछ। समयानुसार भोजन नमिल्दा शान्तिपूर्ण निन्द्रा अभाव रहनेछ।
चिन्ताको बादल हट्नाले मानसिक हल्कापन महसूस गर्नुहुनेछ। मनमा उत्साहको संचार होला। जसकारण दिनभरको समय आनन्दपूर्वक बित्नेछ। भाईबहिनी एवम् आफन्तसँग मेलमिलाप बढ्नेछ। कुनै महत्त्वपूर्ण योजना पनि बनाउन सक्नुहुनेछ।
तपाईंको झगडा हुन सक्ला। पैसा सम्बन्धित लेनदेनमा अत्यन्त सावधान रहनुपर्ने हुन्छ। शारीरिक एवम् मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्ला। परिवारसँग मनमुटावको प्रसंग बन्न सक्छ। खानपिनमा विशेष ध्यान राख्नुहोला।
Previous articleश्रीलंकामा भारी वर्षा : चारको मृत्यु, सात जना हराए, सुरक्षित रहन सूचना
Next articleप्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : नयाँ इजलास गठन गरेर आज सुनुवाइ हुँदै